Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Nambara ny Fianarana Vaksiny Fitsaboana Kansera Vaovao any Sina
Innovent Biologics, Inc. (Innovent), orinasa biopharmaceutical kilasy manerantany izay mamolavola, manamboatra ary mivarotra fanafody avo lenta ho fitsaboana homamiadana, metabolika, autoimmune ary aretina lehibe hafa, ary NeoCura Bio-Medical Technology Co., Ltd. ( NeoCura), orinasa bioteknolojia momba ny fitsaboana amin'ny fanafody RNA mahomby amin'ny AI izay manolo-tena amin'ny fananganana sehatra zava-mahadomelina vaovao RNA manerantany, dia nanambara androany fa nanao fifanarahana fiaraha-miasa stratejika izy ireo mba hanatanteraka fandalinana klinika any Shina momba ny fitsaboana mitambatra amin'ny sintilimab. avy amin'ny Innovent sy vaksiny neoantigen manokana NEO_PLIN2101 avy amin'ny NeoCura.
Ny Innovent dia hiara-hiasa amin'ny NeoCura any Shina mba hanombanana ny fiarovana, ny pharmacokinetics, ny pharmacodynamics ary ny fahombiazan'ny fitsaboana mitambatra amin'ny fampiasana sintilimab avy amin'ny Innovent sy NEO_PLIN2101 avy amin'ny NeoCura amin'ny marary homamiadana, mba hampandrosoana ny fivoaran'ny klinika amin'ny immunotherapy mitambatra ho an'ny fivontosana mivaingana ary miomana amin'ny fandefasana. ny fampiharana Fanadihadiana Vaovao Fanadihadiana (IND) ho an'ny National Medical Products Administration (NMPA) ato ho ato.
Dr. Liu Yongjun, Filohan'ny Innovent, dia nilaza hoe: “Mahavariana anay ny fantsona R&D samihafa an'ny NeoCura sy ny ekipa mpikaroka iraisam-pirenena, ary faly izahay miditra amin'ity fiaraha-miasa stratejika ity mba hijery ny sandan'ny klinika ny sintilimab miaraka amin'ny vaksiny neoantigen ho an'ny fivontosana mafy. . Innovent dia manana fantsona matanjaka manana fahaiza-manao matanjaka amin'ny immunology sy biolojia homamiadana. Amin'izao fotoana izao, manana fanafody vaovao dimy nankatoavina sy navoaka tao Shina isika ary hanana fanafody vaovao 10 mahery havoaka ao anatin'ny 2-3 taona manaraka. Ny sehatra tafiditra tanteraka dia nanangona R&D matanjaka, fampandrosoana ara-pitsaboana ary fahaiza-manao ara-barotra ary mety tsara ho an'ny mpiara-miasa ao an-trano sy any ivelany. Manantena ihany koa izahay fa hijery bebe kokoa ny fahafahana vaovao amin'ny fanitarana ny famantarana sy ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fitsaboana ny sintilimab miaraka amin'ny fitsaboana vaovao. Manantena ny fiaraha-miasa midadasika sy lalindalina kokoa eo amin’ny roa tonta izahay amin’ny ho avy. “
Hoy ny Dr. Wang Yi, mpanorina ny NeoCura: “Amin'izao fotoana izao, ny vaksinin'ny neoantigen dia fomba fitsaboana vaovao mipoitra maneran-tany. NeoCura dia nifantoka tamin'ny R&D momba ny vaksiny neoantigen tumor hatramin'ny nananganana azy, manantena ny handresy ireo fanambin'ny immunotherapy efa misy amin'ny fitsaboana ny fivontosana mafy amin'ny alàlan'ny fampiharana teknolojia vaovao. Ny fiaraha-miasa amin'ny Innovent dia handray anjara mavitrika amin'ny vaksinin'ny neoantigen manokana sy fanafody antibody monoclonal ary hiara-hijery ny fiantraikan'ny klinika amin'ny fitsaboana mitambatra amin'ny fitsaboana fivontosana mafy, izay antenaina hanatsara ny tahan'ny valin'ny immunotherapy homamiadana ary hitondra fahafahana vaovao. ho an'ny regimen fitambaran'ny homamiadana."